दुई जना सचिवको अवकास, चार जना सचिवको सरुवा « Sansar News
८ बैशाख २०७८, बुधबार ०९:३९
काठमाडौं । नेपाल सरकारले चार जना सचिवको सरुवा निर्णय गरेको छ । सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद वैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका पशुपन्छी तर्फका सचिव डा. पेमनारायण कँडेललाई वन तथा वातावरण र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको अतिरिक्त समुहमा समुहमा रहेका मुकुन्द प्रसाद पौड्याललाई बाग्मती प्रदेशको सचिवमा पठाइएको छ ।
वन तथा वातावरणका सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले अनिवार्य अवकास लिएपछि रिक्त रहेको पदमा डा. पेमनारायण कँडेल सरुवा भएका हुन् । यस्तै बाग्मती प्रदेश प्रमुख सचिवमा रहेका डा. मानबहादुर वि.क.ले अनिवार्य अवकास लिएपछि उक्त रिक्त पदमा सचिव मुकुन्दप्रसाद पौडेललाई सरुवा गरिएको हो ।
त्यस्तै उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका (उर्जा) सचिव दिनेशकुमार घिमिरेलाई राष्ट्रिय सतकर्ता केन्द्रमा सरुवा भएको छ । राष्ट्रिय सतकर्ता केन्द्रका सचिव देवेन्द्र कार्कीको उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा सरुवा भएको स्रोतले बताएको छ ।